मृत सागरमा पर्यटन | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | समुद्र तटहरू, एशिया यात्रा
संसारको अनौठो ठाउँ मध्ये एक हो मृत समुद्र। पक्कै पनि तपाईंले यसको बारेमा सुनेका हुनुहुन्छ र मान्छेहरूको अनौंठो फोटो तपाईको पानीमा तैरिरहेको देख्नुहुनेछ, त्यो अवस्थाको अनौठोसँग रमाईलो गर्दै।
मृत सागर इजरायल र जोर्डन द्वारा साझा गरिएको छ र दुबै देशहरूले उनीहरूको किनारमा पर्यटक सुविधा प्रदान गर्दछ। के तपाईंलाई यो गन्तव्य थाहा छ र जहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा जान चाहानुहुन्छ? त्यसो भए पर्यटक र व्यावहारिक जानकारीका साथ यस लेखलाई नहेर्नुहोस् मृत सागर भ्रमण गर्नुहोस्.
1 मृत सागर
2 इस्राएलमा मृत सागर भ्रमण गर्नुहोस्
3 जोर्डनमा मृत सागर भ्रमण गर्नुहोस्
यो एक छ नुन पानी ताल जुन level430०..5 मिटर समुद्र तल छ, केहि छ 304०XNUMX मिटर गहिराई र यो नुनिलो होइन तर नुन नै हो: .34 2.२% खारापन (समुन्द्रमा मात्र भन्दा दश गुणा बढी)। र यसैले मानिसहरू यसको पानीमा तैरिरहेका छन्? अंश मा, यो यो छ कि सुपर नुन हुनुको साथै पानी धेरै घन छ। यो कुरा मानिसका लागि एकदम चासोको कुरा हो जनावर र बोटबिरुवाको जीवनको लागि भय terrible्कर छ त्यसैले हो, यो समुद्री हो muerto.
प्राविधिक दृष्टिले हेर्ने हो भने यो ताल हो जुन जोर्डन उपत्यकामा अवस्थित छ र यसको सबैभन्दा ठूलो सहायक नदी जोर्डन नदी नै हो। यो कुनै पनि खोला वा खोलाबाट बग्दैन र त्यहाँ व्यावहारिक रूपमा वर्षा नभएकोले सम्पूर्ण क्षेत्र नै सुक्खा छ। तर तिमी कहाँको हौं?
क्यासी million० लाख वर्ष पहिले ताल जुन भूमध्यसागरको पानीबाट बारम्बार बगिरहेको थियो, अन्ततः समुद्रमा जोडिएको खाडी बनाउने जुन समयको साथ शुरू भयो नुन भण्डार धेरै बाक्लो
झन्डै २० लाख वर्ष जति नजिकमा उपत्यका र भूमध्यसागरको बीचमा जमिनहरू समुद्रको पानीमा पुग्न सकेन त्यसैले क्षेत्रको बाढी रोकियो। यसप्रकार, विशाल खाडी - लगgoन संलग्न र तालमा परिवर्तन भएको थियो। प्लेट टेक्टोनिक आन्दोलन र जलवायु परिवर्तनहरूले बाँकी गरे।
इस्राएलमा मृत सागर भ्रमण गर्नुहोस्
हिब्रूमा उनलाई यान हा मेलाख, को भनेर चिनिन्छ नुनको समुद्र। यो नेगेभ मरुभूमिको सुन्दर परिदृश्यले घेरेको छ र इस्राएल र जोर्डन बीचको प्राकृतिक सीमाको एक हिस्सा हो। यरूशलेमबाट तपाईं एक घण्टाको यात्रामा कारबाट आइपुग्नुहुन्छ र यो एक धेरै लोकप्रिय गन्तव्य हो दिन खर्च गर्न, आराम गर्न, पिकनिक पाउन वा एक स्वास्थ्य उपचार अनुभव।
त्यहाँ केहि छन् सार्वजनिक तटहरू किनारमा र सबै भन्दा लोकप्रिय बीच हो आइन बोकेक। अरु पनि छन् निजी तटहरूधेरै होटलहरू सम्बन्धित छन् र प्रवेश शुल्क लिइन्छ। यो हुन सक्छ कि तपाइँ एक बर्ष जानुहुन्छ र त्यहाँ अर्को समुद्र तट र अर्को वर्ष छ, एक कम। यो मृत सागरको स्तरमा भिन्नताका कारण हो, प्रति बर्ष एक मिटर वा डेढ मिटरको बिलजमा। त्यसपछि समुद्री तटहरू सर्छन्।
La कालिया बीच यो एक अर्को उत्तरमा अवस्थित अवस्थित छ, यसमा एउटा बार, रेस्टुरेन्ट, उपहार पसल र पर्यटकहरू भित्र जानका लागि धेरै माटो छ। यो यरूशलेमबाट पहिलो समुद्र तट हो त्यसैले तपाईं यसलाई २ minutes मिनेटको यात्रा पछि फेला पार्नुहुनेछ, र ºº०- दृश्यहरू यसले मरुभूमि र समुद्रको प्रस्ताव गर्दछ। अर्को समुद्र तट हो ब्यानकिनी, कालियाको दक्षिण।
यो एक मोरक्कन शैली रिजोर्ट हो, ठूलो मोरक्कन शैली रेस्टोरेन्ट र केही आवासहरूको साथ। यदि तपाईं राष्ट्रिय बिदाको दिनमा जानुहुन्छ, त्यहाँ धेरै मानिसहरू हुन सक्दछन् तर यो अझै रमाइलो छ।
La नेभ मिडबार बीच यो ब्यानकिनी जस्तै पहुँच मार्गमा छ र इजरायली छेउमा मृत सागरको तीन उत्तरी समुद्री किनारमा कमसेकम वाणिज्यिक हो। योसँग राम्रो समुद्री तट, बार्बेक्यु क्षेत्रहरू, एक बार, पसल र युवा वातावरण छ।
La आइन गेदी सार्वजनिक समुद्र तट यो नि: शुल्क हो, यसमा वर्षा र केही बालुवा छ तर धेरै चट्टानहरू पनि छन् त्यसैले यो हिंड्नका लागि सबैभन्दा सहज छैन। यो पिकनिक र आराम गर्न प्राकृतिक माटो र धेरै ठाउँहरू पनि छ। आइन बोकेक समुद्र समुद्रको अर्को दक्षिणी समुद्र हो जुन रिसोर्टहरू छ र उच्च सीजनमा धेरै लोकप्रिय छ। अन्तमा, यी कुनै पनि तटहरू मर्मतको लागि केही समयको लागि बन्द भएको फेला पार्न सकिन्छ।
यदि तपाईं इजरायलको यात्रामा जानुहुन्छ तर कार भाडामा लिनुहुन्न भने, तपाईं जहिले पनि एक पटकमा साईन अप गर्न सक्नुहुनेछ यरूशलेमबाट दिन यात्रा जसमा बस र निजी बीचमा प्रवेश समावेश छ। Eilat वा तेल अवीव बाट पनि यस प्रकारका छन् दिन यात्रा र तपाईं हुनुभएकोले तपाईं मसाडामा भ्रमण थप्न सक्नुहुन्छ। के तपाईंले त्यो क्लासिक हलिउड चलचित्र देख्नुभयो? किनकि मसाडा एक यहूदी किल्लाको नाम हो जसलाई रोमीहरूले घेरा हालेका थिए र यसका सबै कब्जा गर्नेहरूले तिनीहरूको हातमा नपरोस् भनेर आत्महत्या गरे।
वास्तवमा, त्यहाँ धेरै सम्भावित दिन यात्राहरू छन् त्यसैले आधिकारिक इजरायल पर्यटन वेबसाइट भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस्।
जोर्डनमा मृत सागर भ्रमण गर्नुहोस्
जोर्डनको सब भन्दा सुन्दर परिदृश्य मध्ये एक मृत सागरको पूर्वी तट हो, यस्तो क्षेत्र जसले धार्मिक मुद्दाहरू र कल्याण पर्यटन एकसाथ मिलाउन सफल भएको छ। त्यहाँ राम्रो सडकहरू छन्, राम्रो होटल, पुरातात्विक साइट र जातीय विविधता यहाँ वरिपरि त यो एक राम्रो छुट्टी गन्तव्य हो।
मुख्य समुद्र तट मध्ये एक अम्मान हो जुन मुख्य सडकमा छ, मार्ग अम्मानलाई मृत सागरसँग जोड्दछ, होटल क्षेत्र पछि दुई किलोमिटर पछि। यो कम पर्यटन पोखरी र कपडा बदल्न को लागी स्विमिंग पुल र कोठा सहित एक पर्यटक समुद्र तट हो। यो दिन खर्च गर्न जान धेरै राम्रो छ र धेरै उदाहरण को लागी जन्मदिन मनाउन जान्छन्।
La होटल क्षेत्र यो चार र पाँच स्टार कोटी होटलहरूको तारामंडलले बनेको छ स्पा, पौंडी पोखरी, तातो स्प्रि ,्ग, बगैचा सुन्दर र अन्य। याद गर्नुहोस् कि यस देशमा पानीको अभाव छ त्यसैले एक सुक्खा सेटिंगमा यस प्रकारको ठाउँ अद्भुत छ। मृत सागरको उत्तरी तल्लो कुनामा क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ जोर्डनियन समुद्री किनारहरू छन् र होटलहरू यहाँ सामान्यतया गैर-पाहुनाहरूलाई उनीहरूको माध्यमबाट दिन दिनुहोस् जुन उनीहरूले दिन प्रति दिन २D दिनको बारेमा भुक्तान गर्छन् भने।
दरले तौलिया, स्नान र पूलमा पहुँच समावेश गर्दछ। कुनै नराम्रो छैन। यदि तपाइँ केहि भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्न भने याद गर्नुहोस् अम्मान बीच जुन दुई किलोमिटर दक्षिणमा छ, एक घण्टा वा त्यस्तै। यो छ कम लागत समुद्र तट अधिक पहुँचयोग्य र बसहरू यहाँ आइपुग्छन् र त्यहाँ रूखहरू छन् जसले छाया प्रदान गर्दछ। समुद्र तटमा समुद्रको दुई क्षेत्रहरू छन्, दुबै ताजा पानी वर्षा, खेल क्षेत्र र रेस्टुरेन्टहरू। मुख्य क्षेत्र मा पौडी पोखरी छैन र यो धेरै सरल छ।
अन्य क्षेत्रमा पोखरी छ र यो उत्तम छ। जबकि मुख्य क्षेत्र मा महिला राम्रोसँग कभर गरिएको हुनुपर्दछ, यहाँ तिनीहरू बिकनी लगाउन सक्दछन्, सूर्य लाउन्जर र तौलिए भाडामा लिइन्छन् र त्यहाँ लाँकरहरू छन्। अन्त्यमा, अम्मान बीचबाट दुई किलोमिटर टाढा छ समुद्र तट ओ, सुन्दर बालुवा र धेरै आधुनिक कम्पनको साथ: प्याडेड लाउन्जरहरू, इन्फिनिटी पूल, बारहरू, लक्जरी स्पा, र चार रेस्टुरेन्टहरू। यदि तपाईं साताका दिनमा जानुहुन्छ भने पौडी खेल्दैन तर सप्ताहन्तमा यो भीड हुन्छ र यदि तपाईंले होटल बुक गर्नुभएन भने तपाईं कहिँ पनि ओछ्यान पाउन सक्नुहुन्न।
यी समुद्री किनारहरू छन् तर त्यहाँ अन्य चीजहरू छन् जुन तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न: अम्मान समुद्री किनारबाट करीव पाँच किलोमिटर हो मृत सागर दृश्य, पहाड र नौ किलोमीटर माथि। यो मृत सागरको दर्शनीय दृश्यहरूका साथ चट्टानमा बसाइएको भवन हो। त्यहाँ एक गोलाकार सर्किट पनि छ कि पार्किंगबाट शुरू हुन्छ र तपाईंलाई स्थान चिन्न अनुमति दिन्छ।
भित्र काम गर्दछ मृत सागर संग्रहालय यसले इकोलोजी, जियोलोजी, पुरातत्व र ठाउँको ईतिहास कभर गर्दछ। ठिकै छ, अब तपाईले छनौट गर्नुपर्नेछ कि यदि तपाईं मृत सागरमा जानुहुन्छ कि इस्राएल वा यर्दनमा। तपाईलाई के बढी मन पर्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » समुद्र तटहरू » मृत सागरमा पर्यटन